Ubume boBugcisa boBugcisa | Ibhokisi yesikwere - ikhonteyina yakha ihotele yelizwe - iQingdao Xinmao ZT Steel Co., Ltd.
Ngophuhliso kunye nenkqubela phambili yoluntu, ulwazi lwabantu ngendalo esingqongileyo kunye nomxholo wokurisayikilisha inkunkuma uya usomelela ngokomelela.
Ke ngoko, iihotele, izindlu, iivenkile zokutyela, iikofu, njl. Njl.
Indlu eguqulwe yibhokisi yokuhambisa inombono woyilo olukhulu, kwaye ifuthe lokubonwayo lomxube wemibala longeza ukubamba imibala eqaqambileyo, kusinika ukhetho oluninzi. Abantu, iintsapho, kunye namashishini banokuthatha nganye nganye into abayifunayo, eyenziwe ngebhokisi yentsimbi. Indlu inokugcwala nefashoni, kwaye kwangaxeshanye idibanise kakuhle nendalo.
IPACKO HOSTEL ibekwe kwindawo entle ye-bay nang, eVietnam. Inokuthuthwa okufanelekileyo kunye nembonakalo entle. Ukusuka kude, kujongeka ngathi yimisebenzi yobugcisa eyenziwe ngeebhokisi ezimibalabala.
IPACKO HOSTEL sisakhiwo esinemigangatho emibini esakhiwe ngeenxa zonke kwintendelezo esembindini, nesiseko sekhonkrithi nesakhelo sentsimbi senkxaso.
Ekuboneni kokuqala, kubonakala ngathi kukudityaniswa kwezikhongozeli ezininzi. Ngapha koko, iPACKO HOSTEL ngumxube wezikhongozeli kunye nezikhongozeli "ezingezizo" (ifreyim yentsimbi yesakhiwo seemodyuli). Olu luyilo lulungele ukonga iindleko zolwakhiwo kunye nokugcina ukuthembeka kwimodeli yoyilo.
Imifanekiso ivela kwi-Intanethi, ukuba kukho ulwaphulo-mthetho, nceda unxibelelane nokucima